Masaarida Oo U Dareeray U Codeynta Dastuur Milateriga Iyo Dumarka Kaalin Weyn Siinaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaahira, Mareeg.com: Dadka Masar ayaa maanta u dareeray codbixinta Dastuurkii la samaeeyey sanadkii 2012 oo isbade lagu sameeyey, waxaana codbixintaan dhaceysaa xilli Masaari farabadan oo ah taageerayaasha Ururka Akhwaanul Muslimiin ay diidan yihiin.
Amaanka magaalooyinka dalka Masar ayaa aad loo adkeeyey, waxaana meelaha qaar ka dhacay dhimasho soo gaaray dad kadib markii ay isku dhaceen debadbadbaxayaal iyo booliska dalka Masar.
Dr. Cumar Musa oo ah gudoomiyaha guddiga wax ka badelka Dastuurka Masar ayaa sheegay in wax ka badelkaan looga gol leeyahay in Dastuurku noqdo mid u adeegaya dhamaan Masaarida.
Dastuurkaan 2014 ayaa dowr weyn siinaya milateriga Masar, kuwaasoo xilka ka tuuray madaxweynihii ka yimid dhanka Akhwanul Muslimiin ee Dr. Maxamed Mursi.
Sidoo kale, dastuurkaan ayaa kaalin weyn siinaya dumarka, taasoo keentay in meelaha qaar dumarka codeynaya magaalada Qaahira ay ka bataan raga.
Dastuurka Masar ee askartu riixayaan ayaa ka kooban 247 qodob oo 42 ka mid ah hadda lagu daray, 18 qodob ayaaa ka hadlaya xuquuda iyo xorriyadaha, halka 45 qodob ka hadlayaan arrimaha shaqaalaha iyo beeraleyda.
Dastuurkan wax laga badelayo ayaa la sameeyey xilligii uu madaxweynaha ahaa Dr. Muxamed Mursi, waxaana lagu eedeeyey in ururka Akhwaanul Muslimiin ay ka buuxiyeen qodobo farabadan oo danahooda u adeegaya, sida ay sheegayaan dadka kazoo horjeeda.